ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တီကျစ်ကျောက်မီးစက်ရုံနှင့် ကျောက်မီးသွေးမိုင်း ပိတ်သိမ်းရေး ဒေသခံပြည်သူ ? - Yangon Media Group
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တီကျစ်ကျောက်မီးစက်ရုံနှင့် ကျောက်မီးသွေးမိုင်း ပိတ်သိမ်းရေး ဒေသခံပြည်သူ ?
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၆
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး ဓာတ် အားပေးစက်ရုံနှင့် ကျောက်မီး သွေး မိုင်းပိတ်သိမ်းရေးအတွက် ဒေသခံ ပြည်သူနှစ်ထောင်ကျော် က ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံရပ်ဆိုင်းရေး နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော် ခြင်းကို ဧပြီ ၆ရက်က တီကျစ်ကျေး ရွာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပွင့်လင်းမြင်သာ မှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (MATA)မှ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မ တီဝင်ဦးအောင်ကျော်မိုးက ”ဒီနေ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွေကို ပျက်စီး အောင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ တီကျစ် ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံနဲ့ကျောက်မီးသွေး မိုင်းပိတ် သိမ်းရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ အဲဒီဒေသမှာ ရေတွေ ညစ်ညမ်းနေတာတွေ ရှိတယ်။ရေ တွေအဆိပ်သင့်နေတာတွေ ရှိ တယ်။ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သု တေသနပြုလုပ်ထားတွဲ့Report တွေလည်း ထုတ်ပြန်ထားတာ လည်းရှိပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ဘာမှတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါဘူး။ အစိုးရအနေနဲ့ မျက် ကွယ်ပြုပြီး တိုင်းရင်းသားတွေအ တွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိခဲ့ ဘူး”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသား နှစ်ထောင် ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး တီကျစ် ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံရှေ့အထိ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဦးကျော်အောင်မိုးက ”အခု က စမ်းသပ်လည်ပတ်ခွင့်ပေးထား တာဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်လည် ပတ်ခွင့်က ဧပြီ ၂၆ ရက်ဆိုပြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒါကိုစမ်း သပ်လည်ပတ်ခွင့် ထပ်ပြီးတော့ ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် တို့က ထပ်ပြီးတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ် ဖို့ရှိပါတယ်။ ဥပဒေတွေရှိပါတယ်။ ဒီစက်ရုံမလည်ပတ်ခင်မှာ EIA လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကစက်ရုံလည်ပတ်ပြီးတော့ EIA လုပ်တယ်ဆိုတာကိုက ဥပဒေတွေ ကို ပေါ်ပေါ်တင်တင်ချိုးဖောက် နေတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ ရပ်ရွာလူထု၏ ကျန်းမာရေး နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခြင်း ကြောင့် တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ကို ရပ်ဆိုင်းထားသင့်ကြောင်း လေ့ လာသူများက ထောက်ပြပြောဆို မှုများလည်း ရှိသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တီကျစ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှူး တာဝန်ခံ ဖြစ်သူ ဦးဝင်းဌေးက ”စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီ လုပ် ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ရောဂါဖြစ်ကြေးဆိုရင် ဒီ စက်ရုံမှာနှစ်ရှည်လများ လုပ်ဆောင် လာတဲ့ ကျွန်တော်အပါအဝင်စက် ရုံဝန်ထမ်းတွေက အရင်ဆုံး ဒီရော ဂါတွေကို တိုက်ရိုက်ခံစားရမှာဖြစ် ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ဒီစက် ရုံမှာ လုပ်နေတာ ၁၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ အခုလိုအချိန်မှာ မြန်မာပြည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်နေ တယ်။ နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှ ဓာတ်အားရရှိရေးကို လုပ်နေတယ်။ ဒီစက်ရုံကနေပြီးတော့ မဂ္ဂါဝပ်ကိုး ဆယ်ကနေပြီး တစ်ရာကြားထွက် ရှိပါတယ်။ လာမယ့် ဧပြီလကုန် မေလဆန်းမှာ EIA,SIA ဆိုင်ရာ လူထုကိုချပြမယ့်ပွဲကြီးလည်း လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာထဲမှာထည့်ပြီး ကြေညာ ဖို့ရှိပါတယ်”ဟု ပြောသည်။တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် ရှမ်း ပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)တောင်ကြီး ခရိုင်အတွင်းတည်ရှိပြီး ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့ကာ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်း စက်ရုံလည် ပတ်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး လက်ရှိ အချိန်တွင် ပြန်လည်စမ်းသပ်နေ ကြောင်း သိရသည်။
ဆေးခြောက် တရားမဝင်ဖြန့်ချိနေသော ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကို ဒေသန္တရအာဏာပိုင် ၂၅ ဖွဲ့က တရားစွ
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ရေမြောင်းမှ အမှိုက်များကို ပရဟိတလူငယ်များ စုပေါင်းရှင်းလင်း
ကိုဆွေဝင်းကို အာမခံပေးထားသည့် ကိစ္စ လျှောက်လဲချက် တင်ထားမှု အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် မန္တလေးခရို
ကျပ်သိန်းပေါင်း နှစ်သိန်းကျော် လိမ်လည်ခံခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသူများက ဆုံရှုံးငွေများ ပြန်လည်ရရှိေ?
‘သရဲသင်္ဘော’ ဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မကြာမီရုံတင်မည်
ထိုင်းသို့ ဝန်ဆောင်ခ အခမဲ့စနစ်ဖြင့် သွားရောက်ခွင့်ရလုပ်သား တစ်ထောင်ခန့်ရှိပြီ